Ny Paradise Sun Hotel izao dia mitaky marika fizahan-tany maharitra any Seychelles
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Ny Paradise Sun Hotel izao dia mitaky marika fizahan-tany maharitra any Seychelles
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • Seychelles Madagascar Malgache • News sustainability • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ny Paradise Sun Hotel dia nahazo mari-pankasitrahana Seychelles Sustainable Tourism Label
Ny Paradise Sun Hotel ao amin'ny Praslin no mpandray vaovao indrindra amin'ny Seychelles Sustainable Tourism Label (SSTL), miditra amin'ny vondron'olona 21 mpanaraka ny hetsika ara-tontolo iainana, raha toa kosa ny trano fandraisam-bahiny roa hafa no nanavao ny mari-pankasitrahana ho an'ny drafitra.
Mahatsiaro rehareha ny mpitantana ny hotely fa anisan'ny SSTL ary manome toky ny hanohy ny ezaka ho an'ny Seychelles maitso kokoa.
Ankoatra ny fampiasana fahazarana maharitra amin'ny asany andavanandro, dia niara-niasa tamin'ny ONG momba ny tontolo iainana ihany koa izy ireo amin'ny hetsika fiarovana isan-karazany.
Ny SSTL dia fanamarinana an-tsitrapo izay manaiky sy manome valisoa ny orinasam-pizahantany izay mampihatra ny fomba tsara indrindra amin'ny faharetana.
Nandray ny mari-pankasitrahana SSTL sy ny mari-pankasitrahana ny fananganana hotely avy amin-dRamatoa Sherin Francis, Sekretera Principal misahana ny Fizahantany, tamin’ny lanonana fohy natao tao amin’ny foiben’ny sampan-draharahan’ny fizahantany ao amin’ny Botanical House, Mont Fleuri ny alarobia 10 Novambra 2021, ny solontenan’ny Paradise Sun Hotel. , Andriamatoa Richard Marguerite, dia nilaza fa mirehareha ny mpitantana ny hotely fa anisan'ny SSTL ary manome toky ny hanohy ny ezaka ataony ho amin'ny zava-maitso kokoa. Seychelles. Nampiany ihany koa fa maro amin'ireo fepetra SSTL no efa nampiharina tao amin'ny tranobe eo ambany fitarihan'ny birao foibeny ary ny fanamarinana ihany koa dia fitaovana ara-barotra.
Nanatrika ny lanonana ihany koa Ramatoa Laporte-Booyse avy ao amin'ny Chalets D'Anse Forbans any South Mahé sy Atoa Bernard Pool avy ao amin'ny Heliconia Grove ao amin'ny Côte d'Or ao Praslin satria samy nanavao ny mari-pankasitrahana ireo orinasa roa ireo. Nohamarinina voalohany tamin'ny 2015 sy 2016 tsirairay avy, Heliconia Grove sy Chalets D'Anse Forbans dia nampiasa teknolojia isan-karazany mba hampihenana ny fanjifana rano sy angovo ary hitantana loharano hafa amin'ny fomba maharitra. Ankoatra ny fampiasana fahazarana maharitra amin'ny asany andavanandro, dia niara-niasa tamin'ny ONG momba ny tontolo iainana ihany koa izy ireo amin'ny hetsika fiarovana isan-karazany.
Nanambara Rtoa Laporte-Booyse fa “ho an’ny ny indostrian'ny fizahantany mba ho velona isika dia mila mijery ny maha-tompon'andraikitra sy mampihatra ny politika maharitra eo amin'ny fiainantsika andavanandro.”
Nandritra ny lanonana dia niarahaba ny Paradise Sun Resort ny Sekretera Principal misahana ny fizahantany Ramatoa Francis noho ny zava-bitany tamin’ny fahazoana ny mari-pankasitrahana. Noderainy ihany koa ireo trano fandraisam-bahiny nohavaozina tamin'ny fitazonana ny fanomezan-toky ny haharitra.
“Amin’ny fanjakana nosy kely, isika no voalohany mitondra ny voka-dratsin’ny fiovaovan’ny toetr’andro amin’izao fotoana izao, ka izany no mahatonga ny sampana hiezaka hanandratra ny fiaraha-miasa amin’ny lafiny tontolo iainana. Tsy ho tanteraka ny ezaka ataontsika amin'ny faharetana raha tsy misy ny fanohanan'ny mpiara-miombon'antoka. Entanina izahay hahita fa ny mpiara-miombon'antoka amin'ny hotely dia mitazona ny fanoloran-tenany ary mahazo mari-pankasitrahana na dia eo aza ny valan'aretina COVID-19, izay nahatonga ny fahatarana amin'ny fizotran'ny fanamarinana. ”
Niantso ireo orinasa hafa hanao ny dia maharitra sy hanatevin-daharana ny fandaharan'asa, hoy i PS Francis: “Mazava ho azy fa tianay ny hahita toeram-pizahan-tany sy orinasa maro kokoa hiditra ao. Ny ekipanay mitantana ny fandaharan'asa SSTL dia manamafy ny ezaka ataony amin'ny fisoloana vava ho an'ny tanjona maharitra sy ny fiaraha-miasa amin'ireo trano fandraisam-bahiny hafa mba hampitomboana ny fandraisana anjara amin'ny tetika”, hoy Ramatoa Francis.
Niorina tamin'ny taona 2011, ny SSTL, izay azo ampiharina amin'ny trano fandraisam-bahiny amin'ny habe rehetra, dia rafitra fanamarinana an-tsitrapo izay manaiky sy manome valisoa ireo orinasam-pizahantany izay mampihatra ny fomba tsara indrindra amin'ny faharetana ao anatin'ny asany.
Ekena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ny SSTL ihany koa dia mitazona ny satan'ny fankatoavana avy amin'ny Filankevitry ny fizahantany maharitra maharitra (GSTC) ary mikendry ny hampirindra ny faharetana eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany mba hiarovana ny harena voajanahary eo an-toerana ary koa ny fitomboan'ny indostria sy ny fanambinana ho avy.